Igumbi Elilodwa elinethezekile: Ijimu ifakiwe kanye nama-Dog Cuddles amahhala - I-Airbnb
Igumbi Elilodwa elinethezekile: Ijimu ifakiwe kanye nama-Dog Cuddles amahhala
Llandough, Wales, i-United Kingdom
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Faith
Ngo-51 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Faith Ungumbungazi ovelele
Siyakwamukela ekhaya lethu, ukuze uthole ukuhlala okunethezekile, okongayo.
I-TV, i-Wifi ehloniphekile nendawo enkulu yokugcina ifakiwe.
Njengoba isendaweni ekahle eduze kwesibhedlela iLlandough, sinikeza indawo yokuhlala enokuthula uma udinga indawo endaweni. Sithulile, futhi sinakho konke okudingayo ukuze uhlale uphumule.
Eduze kwaseCardiff Bay, eCardiff City Center nasePenarth kodwa kuthule, kunokuphithizela okuncane. IVale yaseGlamorgan Coast iseduze, idolobha eliseduze kakhulu yiCardiff City Center noma iPenarth Town Center.
Uzothola indawo yethu njengekhaya-usuka ekhaya.
Igumbi lokulala elinombhede owodwa. I-TV ene-Amazon Prime kanye nenqwaba yendawo yokugcina, ama-hangers nemicamelo eyengeziwe. Ingidi yomnyango. Kuphephile. Itiye nekhofi elingenamkhawulo ongakusiza ngalo. Ukusetshenziswa kwegumbi lokuhlala langasese futhi.
Sitholakala endaweni ethule ebizwa nge-Llandough, futhi umgwaqo uthule kancane nakuba njengezindawo eziningi, ungase uzwe ukuhamba kwezimoto. Phakathi kwamabili izibani zasemgwaqweni ziyacisha, okusho ukuthi silala kangcono futhi ngokuthula, nakuba eduze kwendlu kuzobe kukhanyisiwe abambalwa ngenxa yokuba seduze kwethu neSibhedlela saseLlandough (esiphambene). Sinendlela yokungena ukuze uyipake, futhi kulula kakhulu ukufika kuyo yonke imigwaqo yezimoto kanye nemigwaqo engu-A ngaphandle komugqa omningi ukuze uphume edolobheni. ICardiff Bay iseduze nemizuzu eyi-7 ukushayela. Idolobha lasePenarth lizungeze i-5 min drive. ICardiff City Center cishe imizuzu eyi-10 ngemoto. Imizana eseduze i-Dinas Powys nePenarth, zombili ezinezindawo eziningi zokudla (kunendawo yokucima ukoma enhle nokudla endaweni yakithi!). Izixhumanisi zokuhamba ezihamba phambili zomphakathi ezinesiteshi sesitimela cishe imizuzu eyi-10 ukuhamba noma amabhasi ngaphandle kwendlu. Ngakho konke okunye okuhle uma ungafuni ukukhokha amanani e-City Center futhi ngokusobala, ngaphandle kokukhokha amanani okupaka e-City Center!
Uhambo olufushane kakhulu lokushayela/ lwetekisi ukuya:
I-Cardiff City Centre
I-Cardiff City Stadium
I-Wales Millennium Centre
Isivinini sethu se-inthanethi sihloniphekile, futhi isignali yethu ye-wifi yesivakashi iyathuthukiswa. Kukhona itafula ekamelweni lakho (uhlangothi lwekhabethe) kanye namasokhethi e-USB.
Wamukelekile kakhulu ukuba uphumule egumbini lethu lokuphumula eliyisipele. I-Cosy-up ngaphansi kokuphonswa kwethu okukodwa futhi ubuke umdlalo othize kumamuvi we-Amazon Prime, i-iplayer nokuningi. Ungakhohlwa ukusicela ama-popcorn!
Sinendawo yokuzivocavoca ezimele 5-mins ukushayela usuka endlini. Singakunikeza iphasi yamahhala ngesikhathi uhlala, futhi wamukelekile ukuthi uhambele wonke amakilasi ngokungenamkhawulo. Ungakwazi futhi ukubhukha ukuze uthole massage yezemidlalo lapha (izindleko ezengeziwe).
Sinesikhala ku-driveway yemoto eyodwa (indawo yokupaka mahhala). Sizothumela imiyalelo yokupaka ngolwazi lokungena.
Igumbi lokugezela nekhishi
Uzobe wabelana ngegumbi lethu lokugezela, liyahlanzwa futhi liyahlanzwa nsuku zonke. Igumbi lokugezela lineshawa enkulu yokuhamba ngezinyawo futhi sinezindlu zangasese eziningi eziyisipele uma kwenzeka ukhohlwa noma yini. Ikhishi lethu lihlangene kodwa uma ulidinga, lihlome ngakho konke obungakudinga. I-Microwave, i-air-fryer, i-hobs, i-toaster, i-dishwasher, isitofu, iprosesa yokudla, amabhodwe amaningi namapani, zonke izitsha zabapheki (ungasho ukuthi ngingumpheki oshisekayo!) kanye nenqwaba yama-condiments namafutha njll.
Sicela wazi ukuthi uhlala ekhaya lomndeni wethu. NGEKE kube yiRitz! Sinezinja, isiqandisi esigcwele, futhi sizoba ngesasekhaya futhi sihlalwe. Silapha ukuze sikunikeze umuzwa wasekhaya usuka ekhaya.
Amasokhethi e-USB ekamelweni lakho kanye neshaja yefoni, uma kwenzeka ukhohlwa eyakho! I-Wifi. Isiqandisi esincane.
Singakuhlinzeka ngesidlo sasekuseni se-takeway uma ujahile noma uzosebenza noma uphume usuku.
Iwashi yesevisi yokuwasha - £4 imithwalo yokugeza futhi yomile, £7 ayi-ayine (phuma ngaphandle kwegumbi lakho kubhasikidi wokuwasha)
Ukusetshenziswa kwephrinta - okokuqala amakhasi ama-2 mahhala, amakhasi alandelayo 20p ngekhasi ngalinye
IMITHETHO YASEKHAYA: Kumelwe uthande izinja! Siba-2 abahlala lapha, oyedwa usekhulile kakhulu. Baziphethe kahle futhi ngeke bakuhluphe nakancane. Asivumeli abangani noma izivakashi ezengeziwe ukuthi zivakashe noma zihlale. Ngesikhathi sobhubhane, sicela ukuthi uhlale nathi kuphela uma ulandela imithetho nemithetho yendawo ngokucophelela, njengoba sinjalo. Inkonzo ephelele yokuwasha ingenzeka, vele ubuze. Kudingeka sisebenzise ikhishi ngemva kuka-9.30pm phakathi nezinsuku lapho siqeda umsebenzi! Sikhululekile futhi sikhululekile. Amahora okuthula ngemva kuka-11pm ukuze sicabangele omakhelwane bethu nezinye izivakashi.
Futhi sicela ungangabazi, uma ungacabanga nganoma yini enye esingayenza ukuze senze ukuhlala kwakho kukhululeke kakhudlwana.
Singababungazi abangu-5* futhi sithanda izivakashi zethu ezingu-5*.
I-TV engu- 40" ene-I-Amazon Prime Video, Fire TV
Itholakala ngakwesokudla maqondana nesibhedlela iLlandough, eduze kwaseCardiff Bay nasePenarth. Yindawo enhle yokufika eCardiff City Center nasogwini, uhambo olufushane nje. Ungahamba uye ngasePenarth olwandle ngesigamu sehora nasePenarth Town cishe imizuzu engama-20.
I am always excited when we have new guests to welcome into our home, as we've met new friends from all over the world since starting with Airbnb.
We want to give our 5 Star Guests a 5 Star Stay - so we give you your privacy but are also on-hand if you need assistance with anything.
I live with my partner Adrian and our 2 big dogs. We're a busy couple that work late hours, meaning you will have the place to yourself a lot of the time. We live at home at the same house you will be staying in.
We own the gym just down the road, so you're welcome to use it during your stay, there are some great classes you can participate in if you want to de-stress or learn a new skill.
We also love to eat - and enjoy cooking at home during the weekends.
Whilst we work long hours and get home after dark, we're always just a message away should you need anything to ensure that your stay is the 5-star experience we hope you have with us
We want to give our 5…
Silapha ekuseni nakusihlwa kodwa sihlale siseduze uma usidinga, noma ngakolunye uhlangothi lomlayezo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Llandough namaphethelo